The Galaxy Fold 2 ga-amalite na ihuenyo 120 Hz | Gam akporosis
Samsung na-esote foldable smartphone, na-akụ ahịa dị ka Galaxy anọ 2Dị ka a tụrụ anya, ọ ga-eji njirimara na njirimara teknụzụ dị mma karịa nke achọtara na Fold Galaxy ewepụtara na February nke afọ gara aga. Na nke a, anyị ga-agbakwunye ụdị ọhụụ ọ ga-etu ọnụ, nke, ọ bụ ezie na-akwadobeghị ya, ga-adị iche.
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, a na-ekpuchido ihe karịrị otu akụkọ nke na-egosi atụmatụ na nkọwapụta enwere ike nke anyị ga-ahụ na ekwentị ọhụụ ọhụrụ a. Ihe ohuru na abiakwute anyi ugbu a nwere gbasara ọnụego ume na ihuenyo, nke ga-abụ 120 Hz.
Ihe ngosi nke egosipụtara maka ihuenyo mpịachi nke Galaxy Fold 2 bụ sentimita 7.59. Mkpebi nke a ga - emepụta, dị ka ehi ehi ahụ, ga - abụ FullHD nke pikselụ 2,213 x 1,689. N'aka nke ya, njupụta pixel ga-abụ ọnụ ọgụgụ yiri nnọọ ihe anyị nwetara na onye bu ụzọ nke ngwaọrụ a. Cheta na mbụ Galaxy Fold na-etu ọnụ 362 dpi, nke abụghị akara kachasị elu na ahịa, mana ọ ka dị mma.
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ na mobile atụmatụ àjà ihe ọ thinụ thinụ na mkpa iko (UTG) na mpịachi ihuenyo, dika ya Ihe nkiri Galaxy Z. Agbanyeghị, UTG ka ga-eji akwa plastik kpuchie ya.
Ọnụ ụzọ GSMArena akụkọ The Galaxy Fold 2 ga-enwe S-Pen stylus, nke na-achọ iji melite ahụmịhe mbadamba, n'agbanyeghị na ụfọdụ mgbasa ozi na-akọ na agaghị enweta pensụl dị otú ahụ. Mpụga ihuenyo ga-modernized, tụnyere nke mbụ Galaxy n'ogige atụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ ọhụrụ ahụ nwere panel nke anụ ọhịa 6.23 nwere mkpebi nke pikselụ 819 x 2,267 na ọnụego ume ọhụrụ nke 60 Hz na igwefoto nwere oghere. Nke ahụ buru ibu karịa nke mbụ 4.6-inch ihuenyo, n'ihi ya, ọ ga-abụrịrị na iji nke ọzọ apịaji apịaji na-enye ahụmịhe ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Galaxy Fold 2 ga-amalite na ihuenyo 120 Hz